Ngaba kufuneka silibuyisele endaweni igama elithi "Geomatics"? -Izixhobo zeGeofumadas
Ngaba kufuneka sithathe indawo yegama elithi "Geomatics"?
NgoDisemba, 2017 Geospatial - GIS
Ukuthathela ingqalelo iziphumo zovavanyo lwakutshanje, olwenziwe yiBhodi yeQela leqela leeGomatics Professionals (GPGB) yeRICS, uBrian Coutts ulandelela indaleko yegama elithi "Geomatics" kwaye uthi ixesha selifikile lokuthatha isigqibo tshintsha
Eli gama liphinde lafumana intloko yalo "engendawo". IBhodi yeQela leqela leeGomatics Professionals (GPGB) ye-RICS, njengoko besitshilo, kutsha nje kwenziwe uphando kusetyenziso lwegama elithi “Geomatics» ukuchaza into ebikade ikho, kwiziko layo, iTopography neHydrography yeCandelo (LHSD) . UGordon Johnston, uMongameli weziko elichazwe ngaphambili, uxele ukuba "iimpendulo ezoneleyo zifunyenwe ukuba ziqhubele phambili ngalomba." Ke ngoko, kubonakala ngathi, ubuncinci kwabanye, kusekho inqanaba lokunganyangekiyo malunga negama elinokuthi lithathwe njengotshintsho. I-Geomatics yayilixesha eliphikisayo ukusungulwa kwayo kwi-1998, kwaye ihleli injalo.
Jon Maynard ingxelo ukuba 1998, 13 kuphela% loMthetho oyiDivision of Land and Hydrography wavota ubabalo zesindululo ukutshintsha igama kwi-Faculty of Geomatics, nokuba 13%, 113 inkxaso isindululo kunye 93 wamelana . Ukuba siphucula loo manani kulandela ukuba, ngelo xesha, kwakukho amalungu e-1585 kwi-LHSD. Amanani anikwe kwenza 7,1% yamalungu wakhetha nanxamnye 5,9%, okt esima 1,2% lobulungu! Ubengayazi into engase ibizwe ivoti isigqibo, okanye isigunyaziso ukuba kubekho inguqu, ingakumbi xa ucinga ukuba 87% khange lucacise uluvo.
Iliphi igama iGeomatics elivela kuyo?
Ihlala icingelwa ukuba igama lavela eCanada kwaye lasasazeka ngokukhawuleza e-Australia nase-United Kingdom. Ingxoxo-mpikiswano eye yakhokelela, e-Great Britain, ngesindululo sokutshintsha kumagama ezifundo zodidi oluphezulu kwiiyunivesithi nakwiCandelo le-RICS ukuze kufakwe ikota entsha, yaxoxwa ngelo xesha, Yenza ukufundwa kwi-Annals yento eyayilixesha elinomxholo wehlabathi. Umnxeba kaStephen Booth wokuba "... inyuswe ngakumbi kune-Geomatics kuthetha ..." kubonakala ngathi akuphelanga nto ngo-2011.
Nangona kukho ubungqina anecdotal ukuba Geomatics igama yayisetyenziswa iminyaka kwangethuba 1960, isikakhulu kwamkelwa ukuba gama (geomatique kwi-French apho geomatics yeyona translation IsiNgesi) yayisetyenziswa yokuqala kwiphepha yezenzululwazi 1975 ngu UBernard Dubuisson, i-geodesta yesiFrentshi kunye ne-photogrammetrist (uGagnon kunye noCleman, 1990). Kuye kubhalwa ukuba ilizwi lamkelwe yiKomiti yamazwe ngamazwe eFrentshi ngo-1977 njenge-neologism. Ngoko ke, akukhona nje kuphela ukuba kukhona kwi-1975, nayo yayinentsingiselo! Nangona kungenakuchazwa ngokucacileyo nguDubuisson, intsingiselo yayo ichazwe kwincwadi yakhe ehambelana nommandla kunye nokubala.
Ngaloo thuba ixesha alizange lithandeke ukulwamkela. Kwakungekade kufike uMichel Paradis, umcebisi waseQuebec, wathabatha ixesha, elifanayo laqala ukusetyenziswa ngokubanzi. IYunivesithi yaseLaval ithathe ixesha eliya kusetyenziswa izifundo kwi-1986 kunye nokuqaliswa kweprogram yesigidi kwiGeomatics (uGagnon kunye neCleman, i-1990). Ukusuka eQuebec kwanyuswa kwiYunivesithi yaseNew Brunswick, kwaye ke kuyo yonke iCanada. Ubume beelwimi eCanada mhlawumbi luyinto ebalulekileyo yokwamkelwa kwayo kunye nokwandiswa kweli lizwe.
Kutheni u tshintsha?
Yindlela emangalisa ngayo le nto yokuba amalungu amadala e-topographic task, xa kwakusaziswa igama elithi "Geomatics" e-Great Britain, esithi ingamkelwa kwaye ichazwe ukuze abo bayikhethileyo bakwazi ukuziqhelanisa neemfuno zabo. Izizathu ezinikezelweyo kwimfuno yotshintsho ibizo, kwindawo yokuqala, ukuphucula umfanekiso we-topogra ngokwenza ukuba kuvakale ngokuvakalayo, ngentengiso enkulu nokwamkelwa kwetekhnoloji entsha kuphuhliso. Okwesibini (kwaye kunokwenzeka, enyanisweni, eyona nto ibaluleke kakhulu) ukuphucula umtsalane wobungcali kubagqatswa beenkqubo zokuphononongwa eyunivesithi.
Kutheni uphinde utshintshe?
Ukujonga kwakhona, kubonakala ngathi sisimo sethemba. Iinkqubo zovavanyo lweyunivesithi ngokubanzi ziye zangenwa zizikolo zobunjineli. Abafundi, bethetha amanani, baye baqhubeka ukwehla, okanye ubuncinci bahlala befanayo, kwaye ubugcisa ngokubanzi khange balisebenzise eli gama ukuba balifake kwitayitile yesenzo kwaye ayifuni ukubizwa ngokuba yi "geomatics." Kwaye kubonakala ngathi uluntu luyazi ukuba i-Geomatics ithetha ntoni. Ukusetyenziswa kwegama geomatics ukutshintshisa ikota yesibini, ikakhulu umxholo wobuso bomhlaba, kubonakala ngathi kusilele kuzo zonke izibalo. Ukongeza, ubungqina bubonisa ukuba i-RGB ye-RPG ayisasakholelwa ukuba i-geomatics ligama elinqwenelekayo ukuqhubeka nokusebenzisa isihloko salo.
Uphando olwenziwe ngumbhali ngonyaka ka-2014, kwaye eyona nyaniso yokuba i-GPGB ikubonile kufanelekile ukuphakamisa umbuzo, ibonisa ukuba kukho ukungoneliseki okushiyekileyo ngokusetyenziswa kwegama elithi geomatic njengokuchaza kwe… into. Ayisiyomsebenzi leyo, ngokuqinisekileyo, njengoko isabonakala yamkeleka ngokubanzi njenge "topography" okanye "ubume bomhlaba." Le ayisiyonyani e-UK kuphela, kodwa iyinyani e-Australia nase Canada, apho ubomi lekamva laqala khona. E-Australia, igama elithi geomatic liphele ngaphandle kokusetyenziswa kwaye lathatyathelw 'indawo igama elithi "isayensi yendawo", yona ngokwayo elahlekelwa sisiseko segama elithi "isayensi ye-geospatial".
Kumaphondo amaninzi aseKhanada, igama elithi geomatic linxulunyaniswa nobunjineli, elibonisa ukuba ubume bengaphezulu kunokuba lelinye isebe koloqeqesho. Oku kuyinyani ngokukodwa kwiDyunivesithi yaseNew Brunswick, apho i- "Geomatics Engineering" imi kunye namanye amasebe ezobunjineli, afana nawomatshini nezomatshini.
Yintoni engatshintsha igama elithi geomatics?
Ngoko, ukuba igama elithi geomatics lenza abaxhasayo bayo bangonwabi, yiyiphi inqaku elingawuthatha indawo? Enye yezinto eziqhelekileyo ekungavumeleki kwayo ukulahlekelwa kwirejista. Ukuba unakho unjiniyela be-geomatics, ngaba unokuba ngabaveleli be-geomatic? Mhlawumbi akunjalo, ndiya kubonisa. Oku kuya kubangela ukudideka ngakumbi.
Ngokunikwa kwesidingo esikhulayo kunye namandla okuchaza ngokuchanekileyo indawo okanye indawo yayo yonke into, ngokugqibeleleyo kunye nefom yesihlobo, igama elithi "indawo" lihlala engqondweni. Oko kukuthi, indawo okanye indawo esikhaleni. Ukuba indawo kwindawo, ke, ehambelana nesakhelo somhlaba, kulandela ukuba indawo-ye-geo iba lukhetho lwendalo. Kuba ulwazi lobunyani ngokunxulumene nendawo luyeyona nto iphambili yokuba ngumphononongi womhlaba, umthamo okhulayo wezixhobo ezininzi ngokuchanekileyo ukwahluka ukunika isiseko sedatha, kunye nophuhliso oluqhubekayo lwezicelo olo lwazi lungasetyenziswa, ubugcisa bukhula ngokubaluleka - ubugcisa obubooMphononongi weGeospatial.
Ngelixa "itoptografiki yomhlaba" inembali ende kunye neqhayiya, ukubhekiswa komhlaba kusenokwenzeka ukuba kuye kwasinda ekusebenzisekeni nasekusebenzeni kwayo. Isakhono somvavanyi wanamhlanje simvumela ukuba asebenzise izixhobo zakhe zombini, amava akhe kunye nokuqonda ngokuchanekileyo, kunye nokuchaneka kwemilinganiselo ukusuka kwimithombo eyahlukeneyo ukuya kwiindawo ezibanzi zesicelo, ngaphaya komda Iindawo zendabuko ze »topogra kunye nopopayi". Oku ngoku kufuneka kuqatshelwe kodwa kugcinwe ubudlelwane nomsebenzi wobugcisa bemveli. Xa inkcazo yemfundo ifunwa ukwahlula umvavanyi wangaphambili womhlaba kwimisebenzi emininzi esebenzisa ubume obuphezulu kwizihloko zabo, umphicothi we-geospatial ligama elanelisa eso sidingo.
IBhooth, uStefano (2011). Sifumane isiqhagamshelo esingekhoyo kodwa asizange sitsho mntu! IGeomatics World, 19, 5
Dubuisson, Bernard. (1975). Zenza i-Photogrammetrie et des Moyens Cartographiques ivela kwi-Ordinateurs. (KJ Dennison, iTrans.). IParis: Iingxelo zeEyrolles.
Johnston, Gordon. (2016). Amagama, iinkqubo kunye nobuchule. IGeomatics World, 25, 1.
UGagnon, uPierre kunye noColeman, uDavid J. (1990). I-Geomatics: indlela emanyanisiweyo nenenkqubo yokuhlangabezana neemfuno zolwazi lomhlaba. IZiko laseCanada loPhando kunye neMephu yeJenali, 44 (4), 6.
Maynard, Jon. (1998). I-Geomatics-ivoti yakho ithathelwe ingqalelo. Ihlabathi lokuPhonononga, i-6, i-1.
Inguqu yokuqala yale nqaku yapapashwa kwiGeomatics World November / Disemba 2017
Post edlulileyo«Ngaphambilini Amava am esebenzisa iGoogle Earth yeCadastre
Post Next Landa imephu kwaye uhlele indlela usebenzisa i-BBBikeOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Ngaba kufuneka silibuyise igama elithi 'Geomatics'?"
UJorge Viloria uthi:
Disemba, 2017 kwi
Inqaku eligqwesileyo, sinokwenza izigqibo malunga nefuthe letheknoloji entsha kwimizila yokuqeqesha njengdala njengephulovu ngokwayo: IJografi, ubude bendawo kunye negradugraphy.
Into ebalulekileyo malunga nalokhu kukuqinisekisa ukuba imigaqo eyamkelwa yinyani, ihlala ihleli phezu kwexesha kwaye ekugqibeleni ibonakalisa iimpawu zorhwebo okanye umsebenzi ochazayo.
Kwaye, i-geomantic ibilokhu ihlala yinto enhle kwikhekhe, kodwa ekugqibeleni kukho amagama azayo aze ahambe njengemfashini kwaye angadluli ixesha. Ndixhomekeke ngakumbi kwisayensi ye-geospatial okanye nje nge-geoscience.